Shijiazhuang City Xinsheng Chemical Co., Ltd. (Xinsheng Chemical) dia naorina tamin'ny 1993 ary misy gorodona 13,230 metatra toradroa, anisan'izany ny faritra fanorenana 10,305 metatra toradroa.Misy seranam-piaramanidina sy lalam-pirenena eo akaikin'ny orinasanay, miantoka ny fifamoivoizana mety.Manararaotra ny hery ara-teknika lehibe izahay, traikefa famokarana betsaka, fitaovana laboratoara ambony, tsipika famokarana simika synthesis.Mandritra izany fotoana izany,
Ny vokatra Xinsheng Chemical dia amidy tsara any Shina sy any ivelany amin'ny marika Meiyu.Ny vokatra fanondranana dia ahitana andiany Zinc Phosphate indrindra, andian-dahatsoratra Aluminum Tripolyphosphate ary andian-dahatsoratra Aluminum Phosphate, izay ampiasaina betsaka amin'ny loko anticorrosive amin'ny lalamby, fiara, sambo sy ny sisa. Aluminum Tripolyphosphate andiany, 720 taonina Aluminum Phosphateseries.Ny vokatra dia manaraka ny fenitra nasionaly, REACH fisoratana anarana, ROHSstandard fepetra, SGs fitiliana, ary ISO9001 rafitra fanamarinana.
Shijiazhuang City Xinsheng Chemical Co., Ltd. dia naorina tamin'ny fomba ofisialy.
marika MEIYU voasoratra anarana.
Ny vokatra zinc phosphate dia naondrana tany Japon, Vietnam, Thailand ary firenena hafa.
Ny vokatra vaovao Phosphorus Zinc White (Zika phosphate sariaka) dia novolavolaina mba hampisehoana bebe kokoa fa ny sandan'ny fampiasana zinc phosphate dia mitovy amin'ny an'ny PZ20 vahiny ary nahatratra ny fenitra REACH ROHS.Noderain'ny mpanjifa.
Nandray anjara tamin'ny fampirantiana coatings Rosiana.
Nandray anjara tamin'ny Dubai Coatings Exhibition.
Nandray anjara tamin'ny fampirantiana Coatings Thailand.
Orinasa vaovao mirefy 13,230 metatra toradroa no haorina ao amin'ny Faritra Fampandrosoana ara-toekarena ao Xinle City, izay vokarin'ny fitaovana mandeha ho azy avokoa.
Ny fifindran'ny orinasa taloha mankany amin'ny tranokala vaovao amin'ny taona 2020 dia hampitombo avo 20 heny ny fahafaha-mamokatra.
Mandraisa anjara amin'ny Fampirantiana Coatings Guangzhou.
Daty iray no tapa-kevitra handray anjara amin'ny fampirantiana palitao Shanghai.
Ny laza ho vokatra tonga lafatra, laza eo amin'izao tontolo izao.
Ny maha-azo itokiana, ny fanavaozana, ny fahamendrehana, ny fandresena, ny fankasitrahana.
Amin'ny "zava-dehibe dimy" ho fenitra: ny fividianana dia tsy maintsy andrana, ny famokarana dia tsy maintsy miorina, ny henjana dia tsy maintsy azo antoka, ny fandidiana dia tsy maintsy miovaova, ary ny orinasa dia tsy maintsy tompon'andraikitra.
Ny fitondran-tena voalohany, ny teknolojia, ny nofinofy ary ny tolona feno herim-po.
Hevitry ny fiaraha-miasa
Mba hamahana olana ho toy ny fepetra takiana.Raiso ho fototra iorenan'ny altruisme ary kendrena ny tsy hisian'ny fandresena.